New York, NY • Body Mass sy NuRu massage
Izao tontolo izao amin'ny toerana iray. Karazana fanorana rehetra: Nuru Massage New York, Body Rub Manhattan
Ny fahalalana ny "Tanàna" toy ny eo an-toerana dia mety ho marika lehibe homem-boninahitra ho an'ny mpandeha. Mialà sasatra ihany: tsy ho vitanao ny handrakotra ireo tranombakoka, galerie, trano fisakafoanana, lavaka manondraka — ary eny, sary pizza $ 1 — ao anatin'ny fitsidihana iray ihany, saingy izany no vaovao mahafaly. Ankehitriny manana vola fanampiny ianao dia tonga ny fotoana hijerena ireo vaovao vao havaozina manosotra ny vatana mpamatsy vola any New York.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana Aprily hatramin'ny Desambra
Jereo daholo (105)
Jereo daholo (10)
Bodyrub any New York